3 Ụzọ nkwado ndabere na mpaghara iPad tupu Imelite ka iOS 9
On Sept 16, 2015, ndị kasị tụrụ anya iOS 9 N'ikpeazụ apụta si, ma ọ bụ buru oke ibu maka gị iPad. Ị na-enweghị oke ma ka ihichapụ music, video, photos na ndị ọzọ faịlụ onwe elu ohere. Achọghị ida ndị a faịlụ? Echegbula. Ị nwere ike ndabere iPad na kọmputa ma ọ bụ iCloud mbụ. Ebe a, na isiokwu a, ga-amasị m na-agwa gị 3 ụzọ ndabere iPad na ma ọ bụ na-enweghị iTunes.
Method 1. ndabere iPad ka Computer na MobileTrans
Method 2. ndabere iPad ka na kọmputa site na iTunes
Method 3. Mee ihe iPad ndabere na iCloud
Ndabere iPad photos, music, video, foto na iMessages na 1 click!
1 Pịa ndabere iPad-abụghị zụrụ ọdịyo na video nakwa dị ka zụrụ n'anya.
Ndabere iPad Photo Library na igwefoto Roll na kọmputa.
Ndabere iPad kọntaktị na email, ụlọ ọrụ aha na ndị ọzọ zuru ezu Ama.
Export iMessages na kalịnda na iPad na kọmputa maka ndabere.
Arụ ọrụ nke ọma na iPad, The New iPad, iPad na Retina ngosi, iPad Obere, iPad Obere na Retina ngosi na iPad ikuku na-agba ọsọ iOS 5/6/7/8/9, na iPhone 6S Plus / iPhone 6S.
Otu iPad na-agba ọsọ iOS 5/6/7/8
An iPad eriri USB
A Windows ma ọ bụ Mac na kọmputa na iTunes arụnyere
Nzọụkwụ 1. Run Wondershare MobileTrans na kọmputa. Na ya isi window, na-aga Back Up My ekwentị mode. Mgbe ahụ, jikọọ gị iPad na kọmputa na iji eriri USB. Ozugbo achọpụtara ịga nke ọma, gị iPad ga-emere na ekpe nke ndabere window.
Cheta na: iTunes ga-arụnyere iji jide n'aka na Wondershare MobileTrans arụ ọrụ kwesịrị ekwesị.
Nzọụkwụ 2. Akọrọ faịlụ na ị chọrọ nkwado ndabere na mpaghara na n'etiti window. Pịa Malite Copy nkwado ndabere na mpaghara photos, music, video, kọntaktsị, kalinda na iMessages si iPad na kọmputa. N'oge dum usoro, jide n'aka na i iPad jikọọ.
Nzọụkwụ 3. Site ndabara, iPad ndabere faịlụ a ga-azọpụta ndị na-esonụ ọnọdụ:
Na Windows OS: C: \_ Ọrụ \_ Administrator \_ My Documents \_ _1_698_1 _ \_ _ 1_683_1_ \_ ndabere
Wondershare MobileTrans-Eme ka ọ nnọọ mfe ndabere iPad na kọmputa, ma ọ bụ ghara free. Ọ bụrụ na ị na-achọ a freeware ime iPad ndabere, iTunes bụ ịrụ ụka adịghị ezi nhọrọ. Ọ na-enyere nkwado ndabere na mpaghara ntọala, akwụkwọ ahụ aja, ngwa, ozi olu ozi olu, na ndị ọzọ. N'okpuru ebe a bụ ihe zuru ezu ndu banyere otú ndabere iPad na iTunes.
ihe Apple eriri USB
Olee otú ndabere iPad na iTunes
Nzọụkwụ 1. Wụnye iTunes na kọmputa.
Nzọụkwụ 2. plọg n'ime eriri USB jikọọ gị iPad na kọmputa.
Nzọụkwụ 3. Mgbe ahụrụ, gị iPad ga-emere na ekpe sidebar nke iTunes. Pịa gị iPad n'okpuru NGWAỌRỤ. Nzọụkwụ 4. Your iPad management panel egosi elu na nri. Pịa Summary taabụ. Kwụpụ 5. Go nkwado ndabere na mpaghara ngalaba na pịa Back Up Ugbu a.
Nzọụkwụ 6. Ma ọ bụ, ị nwere ike nne Mmetụta encrypt Obodo ndabere ma jupụta na a paswọọdụ, iji chebe ndabere. Mgbe ahụ, ndabere usoro-akpaghị aka.
Kwụpụ 7. nkwado ndabere na mpaghara usoro, Akwụpụla gị iPad.
Cheta: Site encrypting gị iPad, i nwere ike na gị onwe onye data nchebe. Ma, ị ga-echeta paswọọdụ.
Mee ihe iPad ndabere na iCloud
Enweghị eriri USB dị na aka? Na-eche na-eweta nsogbu nkwado ndabere na mpaghara iPad na kọmputa? I nwere ike ịgbalị iCloud. Ọ na-enyere gị aka kpọmkwem ndabere zụrụ akụkọ ihe mere eme nke music, fim, TV egosi, akwụkwọ, ngwa, Igwefoto Roll, ntọala, ngwa data, iMessages na ndị ọzọ si iPad ka ígwé ojii nkesa na-enweghị kọmputa. Otú ọ dị, nanị ihe ọ na-enye 5GB free nchekwa maka gị. Ọ bụrụ na ị na-agba ọsọ nke nchekwa, ị ga-akwụ maka ndị ọzọ.
Otu iPad zuru ezu batrị,
An iCloud akaụntụ na-ezu nchekwa
Olee otú ndabere iPad ka iCloud
Nzọụkwụ 1. On gị iPad, mgbata Ntọala> iCloud Nzọụkwụ 2. Kpatụ Nchekwa & ndabere> ndabere Ugbu a.
Uru 1. 1 clik nkwado ndabere na mpaghara iPad enweghị iTunes
2. Ndabere na-abụghị zụrụ ọdịyo na video
3. Ndabere Igwefoto Roll na Photo Library 1. Free
2. Ndabere kasị iPad data 1. Free
2. Ọ dịghị mkpa na kọmputa
3. Ndabere ukwuu data ka ígwé ojii
Cons 1. Mkpa akwụ
2. Na-adịghị nkwado ndabere ntọala, akwụkwọ ahụaja, ngwa data, wdg 1. Were oge dị ukwuu
2. Nwere ike ọ bụghị ndabere na-abụghị zụrụ ọdịyo na video 1. Mkpa WiFi netwọk na iPad
2. Nwere ike ọ bụghị ndabere na-abụghị zụrụ ọdịyo na video
3. Ga nwere zuru ezu nchekwa ígwé ojii nkesa.
Nyefee Data si Old iPhone ka iPhone 6
3 Ụzọ Nyefee Android ka iPhone 6
1 Pịa Nyefee Samsung ka iPhone 6
Top 15 ngwa ọdịnala n'ihi iOS 8
Mfe Wụnye iOS 8 on iPhone / iPad / iPod aka
Nyefee Music na Photos si iPod ka iPad
3 Ụzọ nkwado ndabere na mpaghara iPod aka tupu iOS 8 ọjọọ
5 Atụmatụ na adị iOS 8
Olee otú Downgrade si iOS 8 ka iOS 7
2 Ụzọ Idozi Apple White ihuenyo nke Ọnwụ
> Resource> iPad> 3 Ụzọ nkwado ndabere na mpaghara iPad tupu Imelite ka iOS 8